Ngokuvamile, endaweni ngobukhulu elalihlala zokugcina balimi ukhukhamba. Zonke ngoba lokhu isiko kom ngaphezu kwezinye imifino, futhi inika isivuno esihle. Awazi indlela yokutshala ukhukhamba kule abamba ukushisa? Landela amathiphu.
Uma kukhona elihambisana amasu ezolimo kanye ngempela izimo ezikahle ukukhanya, ngokuphelele real isikhathi elincane isikhathi ukuthola isivuno esihle. Ikakhulukazi uma ukutshala ukhukhamba kule abamba ukushisa senzeka endlini.
Gherkin - isiko ukuthi zingatshalwa unyaka wonke. Kodwa khumbula ukuthi nomsebenzi we zokugcina ebusika - indaba engathí sina ngempela. Uma ufuna ukwenza ukutshalwa yamakhukhamba ku abamba ukushisa wanikeza yi ngemali okukhulu, asilandele ngokucophelela ubuchwepheshe lapho le isiko liyakhula. Lokhu kusho ukuthi uma kuphela bayakwazi ukudala futhi silondoloze e greenhouse izimo ezidingekayo, uthola isivuno esihle ngu ezikhulayo nabo zokugcina. Endabeni okuphambene, izitshalo enempilo. Futhi akusiyo kuphela ngeke sikunikeze inzuzo oyifunayo, kodwa futhi kuzobangela izindleko ezingenasidingo.
Growing ikhukhamba in a abamba ukushisa entwasahlobo - kuyindaba ehluke ngophelele. Kwakuphakathi nalesi sikhathi sonyaka usuku uyaqhubeka kwelulwa, futhi izinga lokushisa ngaphandle siya ngaphezulu. Lona inani esiphelele isikhathi lapho ungakwazi ukhule ukhukhamba. Phela, "inkonzo" nsuku zonke zabo kuyokulahlekisela eshibhile.
Asikhulume okuncane mayelana nokuthi yini okufanele kube zokugcina, lapho ukuqala ukhukhamba likhula futhi lokho okungafanele ukwenze. Akubalulekile ukuba enze isinqumo ukusungulwa zokugcina angesabi. Kulokhu, ngeke bakwazi ukwenza konke ngendlela efanele. Ukuze uzindle ukudalwa greenhouse kuyadingeka ekwindla. Ukuze uqale nge indawo lapho kuyothiwa elise. Kuyadingeka ukwethula ekwindla ka zonke amaminerali kanye manyolo organic. Per imitha square komhlaba idinga okungenani 2.5 kg umquba, futhi superphosphate 45 amagremu 20 amagremu potassium sulfate. Nini zonke lezi umquba, inhlabathi bemba futhi amshiye yedwa kuze entwasahlobo. Lapho kufika isikhathi, phambi okuxekethile, engeza 25 amagremu per imitha square of ammonium nitrate.
Elinye iphuzu elibalulekile kakhulu - isidingo ukuthola ncamashí ukuhlelwa okuzokwenza ukuklama abamba ukushisa yakho. Kusukela namuhla, ungakwazi ukuthenga noma iyiphi isidumbu, metal, abamba ukushisa egoqekayo. Bayoba lula kakhulu ukubeka endaweni nge ukufika kwentwasahlobo, bese wenza Umanyolo ezidingekayo futhi athambise umhlabathi. Uma uthanda greenhouse sokhuni, eqoqwe ngezandla zakhe, kuyinto efiselekayo ukukwenza ngisho ekwindla, phambi kwenqwaba intando umquba.
Cover design umhlabeleli ifilimu izinsuku 12 ngaphambi uhlela ukuqala ukhukhamba ezikhulayo kule abamba ukushisa, okungukuthi ukutshala izithombo. Ngaphezu kwalokho, udinga efudumele ezinhle, ukuze usethe izinga lokushisa elifanele kwenhlabathi kanye nomoya. Ukuze etshalwe kahle izithombo zakho, izinga lokushisa inhlabathi at a 10 cm ukujula akufanele kube degrees ngaphansi kuka 14. Ukuzuza wedwa ngeke cishe kuphela phakathi kuka-March. Uma izithombo liyothi cababa endaweni phansi ezibandayo, kuba ogulayo, futhi cishe, isivuno yamakhukhamba kule abamba ukushisa kuyoba zero.
Udinga ukutshala ukhukhamba esimweni mpo, ubani ebonakala yisithombo e ezingeni inhlabathi noma kancane ngezansi. Kubalulekile ilimaze uhlelo impande. Ngaphambi kokuba atshale futhi emva izitshalo kufanele sinamanzi amaningi.
izithombo etshalwe kudingeka uyophuziswa ngokulinganisela, ngenkathi kugwenywa amanzi noma, Ngakolunye uhlangothi, phezu-omiswe umhlabathi. Kungase kudingeke wenze phosphorus lolo noma nitrogen umquba. Ubuningi Imininingwane yesixazululo kumelwe ibe ngu-2 amagremu ilitha. Kubalulekile ukuba angaqhubeki nokwenza ukunakekelwa okuhle yamakhukhamba. Kungcono zizinisele nsuku zonke. Ngokunakekela onjalo esikhathini esingangenyanga noma ngaphezudlwana kuzodingeka ukuthola isivuno esihle imifino emangalisayo.
Plum Smolinka: incazelo grade, izithombe kanye nokubuyekeza
Strawberry ibanga: incazelo ezihlukahlukene, betshala nokunakekela
Isifo Basic utamatisi nendlela abaziphatha ngayo
Welsy apula esihlahleni - elihle grade ebusika
Ubuhle Universal, noma indlela yokwenza imbali aphume tape: okuyinhloko ekilasini enemininingwane
Collar okuqinile ngoba Izinja
Ethnopedagogics - Iyini? Injongo, kusho futhi izisekelo ethnopedagogics
Indlela ukuchaza ukubaluleka ukubhula ngokufunda intende imigca entendeni yesandla sakho
I-sealant ye-abicah: indawo yesicelo nezakhiwo eziyisisekelo
Indlela imali "Piggy" "PrivatBank"? "PrivatBank", Ukraine
Izinhlobo umzimba kanye nencazelo emfushane
Okunjalo izimfudu ezihlekisayo kolwandle
Ngezinye izikhathi ukuthula - uphawu izinhlungu zokugula okungathí sina. Alalia izingane
Polypropylene amachibi: nokubuyekeza amakhasimende. Pool Cottages polypropylene